အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ အကျော် အမော် တရားဟောဆရာ တစ်ပါး ၊ ဓမ္မ ကတိက နှင့် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် အကျယ်ဖွင့်ဆိုသူ ဆရာ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကိုယ်ကျင့်တရား နှင့် စာရိတ္တပိုင်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ ကို ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်သည့် ဆရာ တော်ကြီး ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆရက်ဒ် အဗ်ဒွလ္လာဟ် ဖွာတွေမီနေယာ သည် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် အမိန့်တော် ကို ခံယူ သွားကြောင်း ဝမ်းနည်း ကြေကွဲ စွာ ဖြင့်တင်ပြ အပ်ပါတယ်။
ဆော်ဒီ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန မှ မခိုင်လုံသည့် အကြောင်းပြချက် ၊ စွဲချက်ဖြင့် ကသီးဖ် နေ ရှီအာ လူငယ်လူရွယ် နှစ်ဦး အား ခေါင်း ဖြတ်ကွပ်မျက်ခဲ့ကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာ သိရှိရပါတယ်။ ဆော်ဒီ ပြည်ထဲ ရေး ဝန်ကြီးဌာန မှ လည်း ကသီးဖ် နေ ရှီအာ လူငယ်လူရွယ် နှစ်ဦး အား ခေါင်းဖြတ် ကွပ်မျက်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။
မေ ၃, ၂၀၂၂ - ၁၁:၄၉ ညနေ
မေ ၂, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၈ ညနေ
ယနေ့ ပါလက်စတိုင်း တစ်နိုင်ငံလုံးသည် မားမားမတ်မတ် ကြံခံတွန်းလှန် နေ သည့် အသွင်သို့ ပြောင်းသွားချေပြီး / ရဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ
ဧပွီ ၂၉, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၃ ညနေ
အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ်အလီ ခါမေနီ မှ ဂါဇာ မှ အနောက်ဘက် ကမ်း ရှိ ပါလက်စတိုင်း ပြည်သူများ၏ ရဲစွမ်းသတ္တိ ၊ မားမားမတ်မတ်ကြံခံ မှု ၊ နိုးကြားမှု နှင့် ခံနိုင်ရည် ရှိမှု ၊ ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ စတေးအနစ်နာ ခံ မှုများဖြင့် ခုခံတွန်းလှန် နေကြသည့် လူငယ်များ ကြံ့ခံရေး တပ်သားများကို ချီး ကျူး ဂုဏ်ပြုပြီး အနာဂတ် ကြံ့ခံမှု နှင့် စံတင်မည့် စံချိန် စံနှုန်းအသစ် ပေါ်ပေါက်မည့် လက္ခာ ကို မြင်တွေ့နေကြာင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ကွဒ်စ်နေ့ ဆိုသည်မှာ ?
ဧပွီ ၂၉, ၂၀၂၂ - ၄:၀၇ ညနေ
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး အောင်ပွဲခံ ပြီး လပိုင်းအနီးငယ် အကြာ ၁၉၇၈ ခုနှစ် ၏လမြတ် ရမ်တွာန် ၁၃ရက်နေ့ တွင် လမြတ်ရမ်တွာန် တိုင်း၏ နောက်ဆုံးအပတ် ၏သောကြာနေ့ အား ကွဒ်စ်နေ့ အဖြစ် ကျင်းပရန် ဟဇရသ် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) မှ အဖိနှိပ်ခံ ပါလက်စတိုင်း သား များ ကို ကူညီဖေးမ ပြီး ၎င်းတို့ဖက်မှ ရပ်တည် ကြောင်း ပြသရန် အတွက် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဧပွီ ၂၉, ၂၀၂၂ - ၁၂:၀၆ ညနေ
ရှီအာ မွတ်စလင်မ်များ နေထိုင်သည့် မဇာရေ ရှရီးဖ် တွင် နောက်ထပ် ပေါက်ကွဲမှု နှစ်ခု ဖြစ်ပွား
အာဖဂန် နိစ္စတန် နိုင်ငံ မဇာရေရှရီးဖ် မြို့ ရှိ ကာန်သီနရ် ကားမှတ်တိုင် နှင့် စဂျာဒီယဟ် ကားမှတ်တိုင် နှစ်ခု တွင် ဗုံး ပေါက်ကွဲမှု နှစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဝမ်းနည်း စွာ သိရှိရပါတယ်။
မောင်လာ အလီ (အ.စ) ၏ ရောင်ဇာတော် တွင် ဇေယာရသ်ပြုသူ လူ ဦးရေ လေးသန်းခွဲ ကျော် ရောက်ရှိ
ဧပွီ ၂၆, ၂၀၂၂ - ၅:၀၇ ညနေ
ယခုနှစ် ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၂၂ခုနှစ် လမြတ်ရမ်တွာန် ၏ ၂၁ ရက်နေ့ မောင်လာ အမီးရွလ် မိုအ်မေနီ အေမာမ် အလီ (အ.စ) ရှဟာဒသ် ခံယူ သည့် နေ့ တွင် နဂျဖ်ဖေအရ်ှရဖ် မြို့ ရှိ မောင်လာ အလီ (အ.စ) ၏ ရောင်ဇာ တော် သို့ ဇေယာရသ် ပြု ရန် လူဦးရေ လေးသန်းကျော် ရောက်ရှိခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် ဗင် အဘူဘကဲရ် (သို့) ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် ဗင် အဘီ ဘကဲရ် ဆိုတာ ?
ဧပွီ ၁၉, ၂၀၂၂ - ၂:၁၈ ညနေ
ဟီဂျရီ ၃၈ ခုနှစ် လမြတ် ရမ်တွာန် ၁၆ ရက်နေ့ သည် ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် ဗင် အဘူဘကဲရ် (သို့) ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် ဗင် အဘီ ဘကဲရ် ၏ ရှဟာဒသ် နေ့ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပရဟိတ သမား မောင်လာနာ သုံးပါး အေမာမ်ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာ ပရဝဏ်တွင် ဓါးထိုးခံရ
ဧပွီ ၅, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၈ ညနေ
လမြတ်ရမ်တွာန် ၏ ၃ရက်မြောက်နေ့ တွင် ပရဟိတ သမား များ ဖြစ်ကြသည့် H.I (ဟွတ်ဂျတ်သ် သိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် ) မောင်လာနာ သုံး ပါး အား အေမာရေဇာ (အ.စ) ၏ ရောင်ဇာ တော် ရှိ ဗရာန်ဗရ်ရေ အအ်ဇန်းမ် (ဆွ) အမည်ရှိ ရင်ပြင်တော် တွင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်း စစ်ဆေးခြင်းခံ နေရသူ အမျိုးသား တစ်ဦး မှ ဓါးမြှောင် ဖြင့် တိုက်ခိုက် ထိုးသတ်ခဲ့သည် လူသတ်မှု ဖြစ်ရပ်ဆိုး ကြီး တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ မောင်လာ သုံးပါး အနက် တစ်ပါး မှာ ရှဟီးဒ် ဖြစ် သွားပြီး နှစ်ပါးမှာ ဒဏ်ရာ ရခဲ့ကြောင်း ဝမ်းနည်း စွာ သတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။
လမြတ် ရမ်တွာန် တွင် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ သေလာဝသ်ကုန်အာန်
ဧပွီ ၃, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၈ ညနေ
လမြတ် ရမ်တွာန် တွင် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ သေလာဝသ် ကုန်အာန် မည်မျှ ပြုခဲ့ကြောင်းကို သိရှိစေရန် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သည် လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် ၂၂၃၁ အား အဆက်မပြတ် ချိုးဖောက်နေပါတယ်
မတျ ၃၁, ၂၀၂၂ - ၁၁:၃၀ ညနေ
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ စအီဒ် ခသီးဗ် ဇာဒေ မှ မကြာသေးမီ က အမေရိကန် ဘက်မှ အီရန် နိုင်ငံ အပေါ် စီးပွား ရေးပိတ်ဆို့ မတရား ပြုမှု ကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သည် လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် ၂၂၃၁ အား အဆက်မပြတ် ချိုးဖောက်နေ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆော်ဒီ မဟာမိတ် အဖွဲ့ သည် ယီမင်အပေါ် စစ်ရေး အရ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် ကြေညာ
မတျ ၃၀, ၂၀၂၂ - ၁၀:၃၀ ညနေ
ယီမင် အဆင့်မြင် နိုင်ငံ ရေး ကောင်စီ ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဘက်မှ တစ်ဖက်တည်း ၃ရက်ကြာ အပစ် အခတ်ရပ်စဲရေး ကို ကြေညာပြီးနောက် ဆော်ဒီ မဟာမိတ် အဖွဲ့ မှ လည်း ယီမင် အပေါ် စစ်ရေး အရ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။
အာယာသွလ္လာဟ် မိုဟမ္မဒ်ဒီ ရိုင်ရှဲဟ်ရီ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် အမိန့် ခံယူ
မတျ ၂၂, ၂၀၂၂ - ၁၁:၂၁ ညနေ
ဟဇရသ် အဗ်ဒိုလ်အဇီးမ် ဟစန်နီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော်၏ဂေါပကလူကြီး မဂ်ျလစ်စေ ခိုဗ်ရဂန် ( ရဲဟ်ဗရ်ရေအင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ရွေးချယ်ရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်များကောင်စီ ) တွင် တီဟီရန် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သူ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် မိုဟမ္မဒ်ဒီ ရိုင်ရှဲဟ်ရီ သည် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ အမိန့်တော်အား ခံယူသွားကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာ သိရှိရပါတယ်။
အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် မိုဟမ္မဒ် အလီ အလဝီ ဂိုရ်ဂါနီ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် အမိန့်တော် ခံယူ
မတျ ၁၅, ၂၀၂၂ - ၅:၃၃ ညနေ
ကမ္ဘာ့ရှီအာ လောက ၏ အကျော်အမော် မရ်ဂျာများ မှ တစ်ပါးဖြစ်သည့် ဟဇရသ်အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် မိုဟမ္မဒ် အလီ အလဝီ ဂိုရ်ဂါနီ သည် နှလုံးရောဂါ ဝေဒနာဖြင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် အမိန့်တော် ခံယူသွားကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာ သိရှိ ခဲ့ရပါတယ်။
ဆော်ဒီ အာရေဗျ တွင် တစ်ရက်တည်း ၈၁ ဦးအား သေဒဏ် ပေး / ရှီအာ မွတ်စလင်မ် ၄၁ ဦး ပါဝင်
မတျ ၁၂, ၂၀၂၂ - ၁၁:၄၈ ညနေ
သတင်း မီဒီယာ များ ၏ အဆိုအရ ဆော်ဒီအာရေဗျ မှ အကြမ်းဖက်မှု ဆိုသည် စွဲချက် ဖြင့် တရက်တည်း ၈၁ ဦး အား သေဒဏ်ပေး ကွပ်မျက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည့်သူ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏သမ္မတ H.I ဒေါက်တာ ဆရက်ဒ် အီဗရာဟီးမ် ရအီစီ မှ ပြည်တွင်းခရီးစဉ် အဖြစ် မာဇင်ဒရာနီ ပြည်နယ် သို့ ရောက်ရှိ
မတျ ၁၁, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၁ နံနကျ
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည့်သူ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏သမ္မတ H.I ဒေါက်တာ ဆရက်ဒ် အီဗရာဟီးမ် ရအီစီ မှ ဝန်ကြီးအချို့ နှင့် အတူ (၁၇) ကြိမ် မြောက် ပြည်တွင်းခရီးစဉ် အဖြစ် မာဇင်ဒရာန် ပြည်နယ် သို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
သိပ္ပံ နှင့် နည်းပညာ ၊ ကာကွယ်ရေးစွမ်းအား ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ၊လုံခြုံရေး နှင့် ပြည်သူ့ သက်သာချောင်ချိရေးသည် နိုင်ငံ အတွက် ခိုင်မာသည့်လက်မောင်း ဖြစ်ပါတယ်
မတျ ၁၁, ၂၀၂၂ - ၁၀:၁၂ နံနကျ
ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ မှ မဂ်ျလစ်စေခွဗ်ရေဂန်နေရဲဟ်ဗရ်ရီ (ခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့) ၏ ကိုယ်စား လှယ်တော်များ နှင့်တွေ့ဆုံချိန် သိပ္ပံ နှင့် နည်းပညာ ၊ ကာကွယ်ရေးစွမ်းအား ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေး နှင့် ပြည်သူ့ သက်သာချောင်ချိရေးသည် နိုင်ငံ အတွက် ခိုင်မာသည့် လက်မောင်း ဖြစ် ကြောင်းမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆရက်ဒ် စစ်သာနီ မှ ပေရှာဝရ် အဖြစ်ဆိုး အား ရှုတ်ချပြီး ဝမ်းနည်းကြောင်း ပြောကြား
မတျ ၅, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၆ ညနေ
ကမ္ဘာ့ အကျော်အမော် မရ်ဂျာတော်များမှ တစ်ပါး ဖြစ်သည့် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီ စစ်သာနီမှ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ပေရှာဝရ် မြို့ ရှိ အကျော်အေမာ် ကစ်ဆေခွါနီ ပါဇာရ် ၊ ကူဂျေ ရေစာဒါရ် အရပ်ရှိ ရှီအာ ဂျအ်မေမစ္စ်ဂျစ်ဒ် တွင် သောကြာနမာဇ် ဝတ်ပြုနေချိန် အကြမ်းဖက်သမားများ ၏ အသေခံ ဗုံးဖောက်ခွဲ တိုက်ခိုက်မှု အား ပြစ်တင် ရှုတ်ချ ပြီး နမာဇ် ဝတ်ပြုရင်း ရှဟီးဒ် ဖြစ်သွားရသူ ၃၀ကျော် အတွက် ဝမ်းနည်း ကြေကွဲ ပြီး ၊ဝမ်းနည်း ကြောင်းပြောကြား ခဲ့ခြင်း အကြောင်း ကို အာယာသွလ္လာဟ်ကြီး၏ ရုံးချုပ်မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ၏ သမိုင်းသည် ရာဇဝတ်မှု များ နှင့် ပြည့်နှက်နေ / တီဟီရန် သောကြာနမာဇ် ရှေ့ဆောင်ဆရာ
မတျ ၄, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၃ ညနေ
အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ တီဟီရန် မြို့ ၏ သောကြာနမာဇ် ရှေ့ဆောင် ဆရာ ၊ H.I အလီအက္က်ဘဲရ် မှ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ၏ သမိုင်းသည် ရာဇဝတ်မှုများ နှင့် ပြည့်နှက်နေကြောင်း စသည်ဖြင့် မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျွန်မူး ကက်ရ်ှမီးယားတွင် ဝတ်ပြုသည့် နေရာများ ကိုပိတ်စေပြီး အရက် ဆိုင်များကို ဖွင့်လှစ်နေသည့် အတွက် အလွန် စိုးရိမ်ရ / H.I အာဂါဆရက်ဒ် ဟစန်မူစဝီ
ဖဖေျောဝါရီ ၂၇, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၈ ညနေ
အန်ဂျွန်မန် ရှရ်အီ ရှီအာယန်း ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ H.I အာဂါ ဆရက်ဒ် ဟစန် မူစဝီ မှ ဂျွန်မူး ကက်ရ်ှမီးယား ပြည်နယ် အတွင်း ဝတ်ပြု သည့်နေရာများ ကို ပိတ်စေပြီး အရက်ဆိုင်များ ကို ဖွင့်လှစ်နေသည့်အတွက် အလွန်စိုးရိမ်မိ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယီမင်နိုင်ငံ ဆအ်ဒဟ်ပြည်နယ် အပေါ် ဆော်ဒီ တိုက်လေယာဉ်များ၏ ရာဇဝတ်မြောက် ဗုံးကျဲ တိုက်ခိုက်
ဖဖေျောဝါရီ ၂၆, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၃ ညနေ
ဆော်ဒီ အာရေဗျ သည် ယီမင်ရှိ လက်နက်မဲ့ အာရပ် မွတ်စလင်မ်များ အပေါ် အဆက်မပြတ် ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်စွာ တိုက်ခိုက် လျက် ရှိပါတယ်။ ယီမင် နိုင်ငံ ဆအ်ဒဟ် ပြည်နယ် အပေါ် ဆော်ဒီ တိုက်လေယာဉ်များ ၏ လူမဆန်စွာ ရာဇဝတ်မြောက် ဗုံးကျဲ တိုက် ခိုက် မှုကို ပြုခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
စစ်သည် မည်သည့် ပြဿနာ အတွက် မှ အဖြေမဟုတ်ချေ / အီရန်
ဖဖေျောဝါရီ ၂၅, ၂၀၂၂ - ၁:၁၃ ညနေ
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ အစိုးရ ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ အလီဗဟာဒရီ ဂျဲဟ်ရမီ မှ အရှေ့ ဥရောပ အခြေအနေ ၊ ရုရှားနှင့်ယူကရိန်း တို့ အကြားစစ်ပွဲ အခြေအနေ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ အစိုးရ ၏ ရပ်တည်ချက်ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန် နိုင်ငံ တွင် ၄၃နှစ်မြောက် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေး အောင်ပွဲ နှစ်ပတ်လည် နေ့ အား စိတ်အား ထက်သန် စွာဖြင့် ဆင်နွှဲ
ဖဖေျောဝါရီ ၁၁, ၂၀၂၂ - ၁၂:၀၇ ညနေ
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ ၄၃ နှစ်မြောက် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲ နှစ်ပတ်လည် နေ့ အား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အတိုင်း အီရန် ပြည်သူလူထု မှ စိတ်အား ထက်သန်စွာ ဖြင့်ဆင်နွှဲ ခဲ့ကြပါတယ်။ ဤနေ့သည် အီရန် လ ၊ ဗဲဟ်မန်လ ၂၂ ရက်နေ့ ဖြစ်ပြီး အီရန် အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ် နှင့် ဘာသာရေး စိတ်ဓာတ် ရှိသူများ၏ အောင်ပွဲခံသည့်နေ့ လည်းဖြစ် ပါတယ်။ အီရန် ပြည်သူလူထု မှ မော်တော်ကား ဆိုင်ကယ်များ ဖြင့် ချီတက် အောင်ပွဲ ခံခဲ့ကြပါတယ်။